टीयू र एएफयूबीच मुद्दा भए पनि विवाद छैन, डीपीआरपछि सडकको समस्या समाधान – Everest Dainik – News from Nepal
टीयू र एएफयूबीच मुद्दा भए पनि विवाद छैन, डीपीआरपछि सडकको समस्या समाधान
उर्गेन तामाङ । चितवनकाे भरतपुर महानगरपालिका–१५ रामपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य अहिले रोकिएको छ । रंगशाला निर्माण स्थलबाट दक्षिणतर्फका स्थानीयले सडक निकासको माग गर्दै रंगशाला निर्माणस्थल परिसरमा लगाएको जस्तापातासहितको तारबार डोजर लगाएर भत्काएपछि निर्माणका सम्पूर्ण कार्य रोकिएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको रंगशाला शिलान्यास हुनुपूर्व नै निर्माण कार्य रोकिपछि देशविदेशमा रहेका नेपालीमा चर्चाको विषय बनेको छ । मुलुकमै पहिलो पटक बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य बीचैमा रोकिँदा अब बन्छ कि बन्दैन? निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्छ? स्थानीयको सडकको माग कसरी सम्बोधन होला? लगायतका विभिन्न अनुत्तरित प्रश्नमा केन्द्रित भएर टिकाटिप्पणी, जिज्ञासा, आरोप, प्रत्यारोप, विरोध, आक्रोशसहितको बहस भइरहेको छ ।
रंगशाला निर्माणस्थलमा सरकारका मन्त्री, सांसदहरुदेखि विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरु, सामाजिक अभियन्ता, मिडियाको बाक्लै चहलपहल देख्न सकिन्छ । असन्तुष्ट बाहेकका स्थानीयले रंगशाला निर्माणको माग गर्दै नाराजुलुससहित र्याली, कोणसभा पनि गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा रंगशाला निर्माण कार्य अन्यौलपूर्ण देखिन्छ ।
स्थानीय रामचन्द्र बस्ताकोटी भन्छन् ‘हामी रंगशाला निर्माणको विरोधी होइनौँ तर यहि संरचनाका कारण पछि विस्थापित हुनु भएन ।’ उनीहरु धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन, वडा कार्यालय लगायतसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नहुने देखिएपछि आक्रोशस्वरुप तारबार भत्काएको बताउँछन् । असन्तुष्ट उनीहरुको यो अडानलाई हेर्दा बाटोको माग सम्बोधन नगरी रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना अलमलमा छ ।
आफूहरुले पटकपटक लिखित रुपमै सम्बन्धित पक्षसामु पुगेपछि स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढ्न खोजेकाले यो घटना घटेको जिकिर गरेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहार्याउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
डीपीआरपछि सडकको कुराः महानगर
जग्गाको स्वामित्व भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र जग्गा भोगचलन गरिरहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले नै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा अझै पनि जग्गा विवाद छ भन्नु रंगशाला नबनोस् भन्नेहरुलाई बल पुर्याउनुमात्रै हुने मेयर दाहालको भनाई छ ।
एएफयुले टीयुसँग कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेको छ । जग्गाको मुद्दा अदालतबाट फैसला नभई रंगशाला निर्माणलाई दिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको विश्वविद्यालयले टीयुसँग कुनै विवाद नरहेको बताएको हो । रामपुरमा रहेको विश्वविद्यालयको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा टीयुलाई दिने र बाँकी २ सय ९८ बिघा एएफयुलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकाले अब कुनै विवाद नरहेको एएफयुका उपकुलपति डा. ढकालको भनाई छ । यस्तै मकवानपुरमा रहेको १ सय ६० बिघामध्ये सय बिघा त्रिविलाई र ६० बिघा कृषि विश्वाविद्यालयलाई दिने यसअघि नै सहमति भइसकेकोले विवाद नरहेको उनको भनाई छ ।
मुद्दा किनारा नलागी जग्गा हस्तान्तरण भयो भनी विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी खेपिरहेको अवस्थामा डा. ढकालले मिलेर अघि बढ्ने सहमति पश्चात मुद्दा भए पनि विवाद नरहेको जिकिर गरे । उनले भने ‘सबै मिलिसकेको छ, लालपुर्जा आउनमात्रै बाँकी हो ।’ उनले थपे ‘मुद्दा टीयु अथवा एएफयु जसको पक्षमा फैसला भए पनि रंगशालालाई जग्गा दिँदा संयुक्त हस्ताक्षर भएकाले रंगशालालाई हस्तान्तरण गरिएको जग्गामा कुनै समस्या आउँदैन । सट्टाभर्नामा महानगरले अन्तै जग्गा उपलव्ध गराएकाले पनि विवाद आउँदैन ।’ यो समाचार सफल खबरबाट साभार गरिएको हो ।